Firenena voalohany any Sodàna no nahazo vaksinin'ny COVID-19
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Sodana » Firenena voalohany any Sodàna no nahazo vaksinin'ny COVID-19
I Sudan dia lasa firenena voalohany tany Moyen Orient sy Afrika Avaratra nahazo ny vaksinin'ny COVID-19 tamin'ny alàlan'ny COVAX Facility.
Ny fatra voalohany dia ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo olona mihoatra ny 45 taona miaraka amin'ny aretina mitaiza.
Ny fandefasana dia manaraka ny fahatongavan'ireo zaridaina 4.5 metric taonina sy boaty fiarovana, ampahany amin'ny tahiry iraisam-pirenena vatsian'ny Gavi izay natolotry ny UNICEF tamin'ny anaran'ny Facility COVAX.
Ny minisitry ny fahasalamana ao Sodana dia manentana ireo mendrika hisoratra anarana sy hanao vaksiny raha vantany vao mahazo fotoana izy ireo.
Sudan dia nahazo doka 800,000 19 tamin'ny vaksinin'ny COVID-19 tany amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (MENA) izay nomen'ny AstraZeneca. Ireo vaksininy dia natolotra tamin'ny alàlan'ny fanohanan'ny UNICEF tamin'ny alàlan'ny COVAX, fiaraha-mitantana izay tarihin'ny World Health Organization (WHO), Gavi, ny Global Vaccines Alliance, ary ny Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), izay miantoka ny fizarana mitovy amin'ny COVID-XNUMX vaksinin'ny firenena na inona na inona karamany.
Ny fandefasana dia taorian'ny fahatongavan'ireo syringes 4.5 metric taonina sy boaty fiarovana, ampahany amin'ny tahiry iraisam-pirenena vatsian'ny Gavi izay natolotry ny UNICEF tamin'ny anaran'ny Facility COVAX ny zoma 26 febroary 2021 lasa teo, manakiana ny vaksiny azo antoka sy mahomby ao ny Afovoany atsinanana. Ny WHO dia niara-niasa tamin'ny manampahefana nasionaly hametraka paikady fanaovana vaksiny izay misy fiofanana ho an'ireo mpanao vaksiny, miantoka izany fiarovana ny vaksinina, ary fanaraha-maso ny vokany ratsy.
Ny fandefasana vaksiny voalohany natao androany dia hanohana ny fanaovana vaksinin'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny olona mihoatra ny 45 taona miaraka amin'ny toe-pahasalamana mitaiza, mipetraka amin'ny faritra misy fifindrana avo na antenaina avo lenta, manamarika ny dingana voalohany amin'ny fampielezana vaksinim-pirenena.
Amin'ny fanaovana vaksiny ny mpiasan'ny fahasalamana any Sodana aloha, dia afaka manohy manome serivisy manavotra aina izy ireo ary mitazona rafi-pitantanana fahasalamana miasa. Zava-dehibe ny fiarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana izay miaro ny ain'ny hafa.
Dr. Omer Mohamed Elnagieb, minisitry ny fahasalamana ao Sudan, dia nankasitraka ireo mpiara-miasa rehetra niara-niasa tamin'i Sodana mba ho firenena voalohany manerana ny faritra nahazo vaksinina nanohitra ny COVID-19 tamin'ny alàlan'ny COVAX Facility.
"Ny vaksininy dia ampahany lehibe amin'ny fifehezana ny fihanaky ny viriosy any Sudan ary hiverina amin'ny laoniny", hoy ny dokotera Omer Mohamed Elnagieb. Nanentana ireo mendrika hisoratra anarana sy hanao vaksiny raha vantany vao mahazo fotoana.
Eran-tany sy any Sodana, ny COVID-19 dia nanakorontana ny fanaterana serivisy tena ilaina ary manohy mitaky fiainana sy manakorontana ny asa fivelomana. Tamin'ny 1 martsa 2021, Sudan dia nahatratra 28,505 nanamafy tranga COVID-19 ary maty 1,892 nifandray tamin'izany, nanomboka tamin'ny 19 martsa 13 ny tranga tsara COVID-2020 voalohany.
“Vaovao tsara ity. Amin'ny alàlan'ny Facility COVAX, Gavi dia manome antoka fa ny firenena rehetra dia manana fotoana mitovy ahazoana miditra amin'ireo vaksinina mpamonjy aina ireo. Manohy miasa izahay mba tsy hamela olona ao ambadiky ny fanefitra vaksiny, "hoy i Jamilya Sherova, Senior Country Manager for Sudan ao amin'ny Gavi, the Vaccine Alliance.
"Ny fanantenantsika ho sitrana amin'ny areti-mandringana dia amin'ny alàlan'ny vaksininy," hoy i Abdullah Fadil, solontenan'ny UNICEF Sudan. "Ny vaksinina dia nampihena ny areti-mifindra maro, namonjy ain'olona an-tapitrisany ary namono tamin'ny fomba mandaitra aretina maro," hoy hatrany izy.
Dr. Nima Saeed Abid, solontenan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana any Sudan, dia nanamafy fa azo antoka ireo vaksininy voaray androany ary nekena tamin'ny alàlan'ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny fampiasana vonjy maika ny WHO mba hampiasaina any Sudan sy any amin'ny firenen-kafa. Niarahaba ny Governemantan'i Sudan izy, ny Minisiteran'ny fahasalamana federaly ary ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny zava-bita lehibe izay hiantohana ny mponina any Sodana ho voaro amin'ny aretina mahafaty izay miparitaka hatrany.
“Faly ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana fa anisan'ity dingana lehibe ity amin'ny valin'ny COVID-19 any Sudan. Ny vaksinina sy ny vaksinina dia tokony ho an'ny rehetra ”, hoy ny fanamafisan'ny Dr. Nima. "Fa tokony hotadidintsika foana fa ny vaksiny dia ampahany amin'ny fomba feno fotsiny - fitaovana iray ihany ao amin'ny fitaovam-piadianay hiadiana amin'ny viriosy izy ireo ary mandaitra indrindra raha ampiarahina amin'ny paikady rehetra momba ny fahasalamana sy ny fisorohana ny tena manokana."
Miaraka amin'ny fanohanan'i Gavi, ny UNICEF sy ny WHO dia hanohana ny Governemantan'i Sudan hamoaka ny fampielezana vaksinim-pirenena ary handamina ny vaksinin'ny vaksiny manerana ny firenena mba hahatratra ireo olona mendrika vaksinina.
Ny horohoron-tany tany amin'ny Nosy Avaratr'i Nouvelle-Zelande dia niteraka fampitandremana ho an'ny tsunami
Mety ho an'ny fizahan-dranomasina any India goavambe